Burmese taste - Iora: နံနက်စာများ ၁
Nyi Linn Thit February 25, 2011 at 3:16 AM
အခု ဒီပို့စ်ကို ဖတ်နေတဲ့အချိန်က နေ့လယ်ဖြစ်နေပြီ၊ အခုလေးတင်ပဲ နေ့လယ်စာ စားပြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ မနက်စာတွေကို သွားရည်ကျတုန်း...၊ အကုန်လုံး စားချင်စရာတွေ ချည်းပဲ..။
Iora February 25, 2011 at 11:12 AM
အကုန်လုံး သာစားသွားပါ၊ အဲဒါတွေသာ တစ်ခုချင်းတင်နေရင် တော်တော်တင်ရမယ်။ စာရေးရမှာလည်း သိပ်စိတ်မပါသေးတော့ ရုိုက်ထားတဲ့ အထဲက တချီု့ ပုံ တွေတင်လိုက်တာပါ။
ဒီလိုလုပ်ပါလား..ညစာမစားခင် တစ်ခါထပ်ကြည့်လိုက်ပါလား ပိုဆာသွားအောင်လေ။ :D
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 26, 2011 at 3:10 AM
ဘယ်ကတည်းက ချက်ပြီး သိမ်းထားတာတုန်း
တစ်ရက်ကို တစ်ခုလောက်နဲ့အတူ လုပ်နည်း ချက်နည်းလေးနဲ့ တင်ပေးရင် ပိုမကောင်းပါလားနော်။ လူကိုနှိပ်စက်တယ်
မကြိုက်တာလည်း တစ်ခုမှ မပါဘူး။ ကုလားစာ မြန်မာစာ ဘိုစာ ဘာစာမဆို အကုန်ကြိုက်
ဟိ အစားအသောက်က လူနဲ့တည့်တယ်လေ
မနက်စာတွေက တကယ့်ကို ရှယ်တွေချည်းဘဲ
အိုး အပြင်မှာ တကယ်စားလိုက်ရလို့တော့ ဇူစကာ ပုဏ္ဏားလို့ ဗိုက်ကွဲချင် ကွဲပါစေတော့ စားဦးမှာ
Iora February 27, 2011 at 12:42 AM
စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံတွေလေ။ ချက်နည်းလေးတွေက သိပ်လည်းမဆန်းဘူးထင်လို့ ရယ်၊ ရေးရမှာလည်းနဲနဲပျင်းလို့ ရယ်ကြောင့်မရေးဖြစ်တာပါ။ ကိုယ့်ကိုအစားအသောက်လုပ်ရင် လက်ကြီးတယ်လုို့ ပြောကြတယ်။ ဟုတ်တယ် အဲဒါကြောင့်လုပ်ပြီးရင် စားမဲ့သူမျှော်နေတာ။ စားမယ်ဆိုလုို့ ကတော့ ကျွေးပြီးသားဘဲနော်။ သတိသာထား။
KhinU Khine March 4, 2011 at 5:43 AM
very nice dishes. what brand do you use to make the puri. is the round wonton skin. very good short cut. thanks.
Iora March 5, 2011 at 12:21 AM
I don't remember the brand. Yes, it is the round wonton skin. Actually,afriend of mine told me to make with the wonton skin. After making it I like that idea too. I don't see much difference.
သဉ်ဇာ - Thinzar March 10, 2011 at 9:50 PM
အစ်မ.. ဖက်ထုပ်ရွက်ကို ကြော်ရင် ပူရီဖြစ်သွားတာလား.. ထူးဆန်းတယ်.. ကြော်ကြည့်ဦးမှ.. ဖြစ်ရင်တော့ ရှယ်ဘဲ.. မဟုတ်ရင် ပူရီလှိမ့်ရတာ မလွယ်ဘူး..
Iora March 10, 2011 at 11:10 PM
ဖက်ထုပ်ရွက်ကုိုဆီများများနဲ့ ကြော်လိုက်ရင် ပုံထဲကအတိုင်း ပူရီနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ မွမွလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပူရီဖြစ်သွားသလားဆိုတော့...သိပ်ဇီဇာမကြောင်တဲ့သူဆုိုရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောမယ်ထင်ပါတယ်။ ပူရီအတွက်ပေးရတဲ့ အချိန်နဲ့ စာရင်တော့ short cut မို့ လို့ ကိုယ်တော့တခါလုပ် တခါသဘောကျသွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းပြောတုန်းက ကုိုယ်လည်းအဲဒီလောက်တူမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ လုပ်စားမိမှ နည်းလမ်းရသွားတာ။ ကြော်ရင်လည်းအရမ်းမြန်တယ်။ ရှယ်ဘဲ ရှယ်ဘဲ။
ညယံ August 5, 2011 at 12:30 AM
မနက်စာလေးတွေ ငေးပြီး စားချင်လိုက်တာကွယ်။ ခုတလော အိပ်ရာထ နောက်ကျတာနဲ့ ကောင်းကောင်းတောင် လုပ်မစားနိုင်ဘူး။
စုံနေတာပဲ။ အသုတ် နဲ့ အကြော်စုံတွေ အကြိုက်ဆုံးပဲ :)
Iora August 6, 2011 at 9:43 PM
ညယံပြောတာနဲ့ ကုိုယ်လည်း ပုံတွေပြန်ကြည့်ပြီး ဟိုဟာစားချင်သလို ဒီဟာစားချင်သလိုနဲ့ ...း)
ကိုယ်လည်း ခုတလော ကြုံရာစားနေရတယ်။